Ny fifohana rivotra eto an-tany amin'ny tsingerin'ny zavamaniry vanim-potoana | Green Renewable
Ny fifohana rivotra eto an-tany amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny zavamaniry vanim-potoana
Daniel Palomino | | tontolo iainana, General, Tontolo_iainana
Mba hamaritana ny vanim-potoana nifotoran'ny taona stations, ao anatin'ireo fe-potoana niresahantsika ireo dia misy toetoetran'ny toetr'andro maharitra amin'ny faritra iray, ao anatin'ny faritra iray.
Araka ny fantatrao, ireo vanim-potoana ireo dia 4 (lohataona, fahavaratra, fararano ary ririnina) ary maharitra 3 volana eo izy ireo.Raha tsy fantatrao, ny fizaran-taona dia tena vokatry ny fitongilanan'ny axe spin an'ny Tany mikasika ny fiaramanidina manodidina azy Sol, noho izany fanatontosana fa ny faritra samy hafa dia mandray tara-pahazavana arakaraka ny fotoan'ny taona.
Mazava ho azy fa noho ny halavan'ny andro sy ny fironan'ny Masoandro ambonin'ny faravodilanitra.
1 Fiainan'ny tany
3 Kitapo zavamaniry mandritra ny vanim-potoana
5 Ny fanamby lehibe
Saingy tsy hiresaka aminao momba ny vanim-potoana amin'ny ankapobeny aho fa momba ny tsingerin'ny zavamaniry mandritra ny vanim-potoana.
Miaraka amin'ny fiovan'ny vanim-potoana ny ny zava-maniry koa miova miaraka amin'ny tsingerinyindrindra ho an'ny latitude lavitra ny ekoatera.
Ohatra, rehefa tonga ny fararano ny zavamaniry atao hoe very ravina hahasitrana azy ireo aorian'izay rehefa miditra ny lohataona.
Ny fitsimohan'ny voa, ny fitomboany, ny fahaverezan'ny ravina, ny voninkazo, sns. izy ireo dia ampahany amin'ny tsingerin'ny zavamaniry mandritra ny vanim-potoana.
Izahay, ny tiako holazaina amin'ny maha-olombelona amin'ny ankapobeny, dia nanomboka nanelingelina betsaka tamin'ireto tsingerina fizaran-taona ireto, na dia izany aza, mamorona endrika izy ireo ary mamela anay sary toa ilay hasehoko anao manaraka.
Amin'izany no ahitantsika ny tsingerin'ny zavamaniry mandritra ny vanim-potoana izay tsy inona fa ny mahita ny "miaina" ny tany ary manome fiainana. Satria, ny zavamananaina rehetra dia miankina amin'ireto tsingerina ireto amin'ny fitomboan'ny zavamaniry, na ho an'ny sakafo, ho an'ny oxygen ary maro hafa.
Tsy misy olona Bremer dia namorona andian-tsary mampiseho antsika ny "respiration" an'ny Tany amin'ny alàlan'ireny tsingerin-javamaniry mandavantaona ireny mandritra ny herintaona.
Avy ny data NOAA STAR, rindranasa zanabolana sy ivon-pikarohana, izay mampiasa ny sensor VIIRS (Visible Infrared Imager Radiometer Suite) eny ambonin'ny satelita SNPP (Suomi National Polar-Orbiting Partnership) hahazoana vaovao antsipirihany momba ny zavamaniry eto an-tany isan-kerinandro.
Kitapo zavamaniry mandritra ny vanim-potoana
Amin'ny sarintany azonao jerena ny tsingerin'ny fizaran-taona amin'ny alàlan'ny Herinandro 52 ny faharetan'ny iray taona, manokana ireo sary ireo dia maneho ny 2016.
Ny fiakarana sy ny fihenan'ny fitomboan'ny zava-maniry any amin'ny hemisphere avaratra dia hita miharihary izy ireo.
Na izany aza, araka ny asehon'ny faritra samihafa amin'ny planeta, dia hita ihany koa ireo tsingerina sy vanim-potoana hafa.
Ny faritr'i Nouvelle Zélande, Brezila ary atsimon'i Afrika manana ny tsimbadika mifanohitra amin'ny an'ny Avaratra izy ireo.
Tsikaritra ihany koa ny fomba hanombohan'ny toetr'andro mavo any Inde ny monsoons.
Ilay fiovana manokana azo jerena amin'ny sari-tany dia antsoina "Maitso", na amin'ny teny siantifika bebe kokoa, dia ny Fanondroana legioma ny fahasamihafana ara-dalàna (SMN).
Ny maitso dia azo ampiasaina hanombanana ny fiandohan'ny sy ny fahalevonan'ny zava-maniry, ny fiandohan'ny vanim-potoana maniry ary ny dingana fenolojika.
Ho an'ireo faritra tsy misy zavamaniry (tany efitra, tendrombohitra avo sns), ny soatoavina voalaza dia mampiavaka ny toetr'andro.
Ny fanamby lehibe
Ny famoronana ny "respiration" an'ny Tany amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny zavamaniry dia nanjary fanamby hatrizay ny sary mihetsika dia maherin'ny 50.000 tsingerina mifanaraka amin'ny 52 herinandro amin'ny taona.
Ny zavatra rehetra dia sarahina amin'ny habe, ny loko ary ny opacities, noho izany dia nianarana izy ireo Fomba 3 samihafa raha hijery hoe iza no mety hitovy amin'ilay voajanahary indrindra mandra-pahazoanao ny valiny azonao jerena etsy ambony.
Ary raha mbola liana amin'ny fahitana ny fahasamihafana amin'ny antsipiriany kokoa ianao azonao jerena ilay kinova miadana kokoa eto, na dia mampitandrina anao aza aho fa raha marina fa miadana kokoa izy io dia tsy maintsy manam-paharetana ianao mahita ireo 52 herinandro.
Araka ny efa nampoizina sy noho ny fanampian'i Nadieh Bremer dia afaka mankafy an'io asa io isika izay manamarika tsara ny fomba fiasan'ny zavamaniry toy ny havokavoky ny planeta ary tsy maintsy hikarakara sy hiaro azy ireo amin'ny vidiny rehetra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Ny fifohana rivotra eto an-tany amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny zavamaniry vanim-potoana
Mahazo angovo azo havaozina avy any amin'ny ranomasina
Ny CNMC dia manome alalana ny famoronana zavamaniry fotovoltaika lehibe indrindra any Eropa any Murcia